Connect Watch ichavhura smartwatch neLinux seye inoshanda system | Linux Vakapindwa muropa
Gnu / Linux smart zvishandiso zvishoma asi zviri kukura zvishoma uye zvinotarisirwa kunge zviri padyo chaipo kune vazhinji vashandisi. Uye isu tinoti "zvine hungwaru" nekuti Android, iyo inonyanya kufambiswa sisitimu yekushandisa pakati pemidziyo yakadai semafoni efoni, mawatchwatches kana maIoT zvishandiso, yakavakirwa paLinux Kernel. Asi kure neApple, huwandu hweanoshanda masystem kana "kugoverwa" anoshandisa Gnu / Linux kana Linux mashoma kwazvo.
Pakutanga gore rino akasangana iyo nhau yeAsteroid OS, Inoshanda system ye nharembozha dzinovakirwa paGnu / Linux. Iyo inovimbisa yekushandisa sisitimu asi iwe hauna kana chishandiso chinotakura neiyi inoshanda system. Kusvika zvino.
Kambani yakadaidzwa Connect Watch yakazivisa smartwatch yekutanga ine Asteroid OS. Ichi chishandiso chinoshandisa Mediatek processor kuita, 1 Gb yegondohwe ndangariro uye 3G module inobvumidza kufona kuburikidza neyakadai. Chigadzirwa chinomuka kuzvimiririra kwemazuva mana uye mutengo wechigadzirwa uye zuva rekutanga hazvizivikanwe. Asi isu tasimbisa iko kushandiswa kweAsteroid OS sisitimu yekushandisa yeiyi kifaa.
Connect Watch ichava yekutanga kambani kuvhura smartwatch yekutanga yekutengesa neiyi imwe nzira kune Android Wear, asi chichava chisiri choga chigadzirwa cherudzi urwu chinogona kunge chiine Asteroid OS. Vhura iyo yepamutemo webhusaiti Kubva kuAsteroid OS chirongwa isu tinogona kuwana maitirwo ekuisa ino yekushandisa system pane zvishandiso zvatove zviripo uye zvinouya neApple Wear.
Ehezve, gwara harisi iro rinokonzeresa izvo zvinogona kuitika kune chishandiso. Uye hapasati paine nzira yakavimbika uye yakachengeteka yekuchinja mashandiro eiyo smartwatch. Ini pachangu, ini ndinofunga kuti iyo Ungano Yekutarisa chishandiso inogona kuve imwe nzira huru, imwe nzira isingaiti kuti tivimbe ne Android Wear, asi kubva kune iyo ruzivo iriko, zvinoita kuti zvese zvinoenderana vaporware, mudziyo unenge usipo chaizvo. Asi chero zvakadaro, zvinoita sekunge Asteroid OS yave kufarirwa uye izvo zvakanaka kune iyo Nharaunda uye kune avo vedu vari kutsvaga imwe yakasununguka sarudzo kune Android Wear.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Connect Watch ichavhura smartwatch neLinux seye inoshanda system